Nuur Cadde: “Dowladdu waa inay wax ka qabataa dilalka loo geysanayo Suxufiyiinta” – idalenews.com
Nuur Cadde: “Dowladdu waa inay wax ka qabataa dilalka loo geysanayo Suxufiyiinta”
Ra’iisul wasaarihii hore ee Xukuumadda Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa ka hadlay dilalka loo geysanayo Suxufiyiinta Soomaaliyeed, isagoo soo hadal qaaday dilkii ugu dambeeyay ee allaha u naxariistee Wariye Cabdi Xareed Cismaan loogu geystay Muqdisho.
Nuur Cadde ayaa sheegay in ujeedka ka dambeeya bartilmaameedka Suxufiyiinta uu yahay in la aamusiyo warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgasha gudaha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Dowladdoo KMG ahayd ee Soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan kooxo u taagan inay dilaan Suxufiyiinta Soomaaliyeed, balse waxaa uu sheegay in Dowlada looga baahan yahay inay wax ka qabato arrintaasi.
Masuulkan oo hadalka sii wata ayaa sheegay in looga baahan yahay Suxufiyiinta inay muujiyaan samir Iyo dulqaad, una dhabar adeegaan shaqooyinka ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed.
” Suxufiyiinta waxaan leeyahay ku dadaala shaqadiina, si aad shaqada aad shacabka u heysaan aydnaan uga tagin, dulqaad muujiya, maalin uun Maxkamad ayaa la soo taagi kooxaha dilalka Suxufiyiinta ka dambeeya” ayuu yiri Ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde.
Nuur Cadde Dowladda Soomaaliya ayuu ku adkeeyey inay wax ka qabato beegsiga suxufiyiinta loogu geysanayo Magaalada Muqdisho.
Axmed Madoobe oo ka hor yimid qorshaha maamulo loogu sameynayo gobolada laga saaray Al-Shabaab
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukun isugu jira dil iyo xabsi ku ridday askar ka tirsaneyd ciidamada